08-26-2011 02:33 PM #331
အသုံးများတဲ့ မြန်မာဘလော့ မြန်မာဖိုရမ် မြန်မာဆိုရှယ်နက် ဝက်လိပ်စာလေးတွေကို စုစုစည်းစည်းနဲ့ သိချင်ပါတယ်။
honelay86, justkidding, ko too, KoSetPe, Nsaboy, shadow69, TUN2N, xxMMCPxx, yokesoe
09-09-2011 10:32 PM #332
ကိုကို မမ တို့ ခင်ဗျား
နှင်းဆီပန်း စိုက် နည်း ထိန်းသိမ်း နည်း ပိုးမွှား ကာကွယ် နည်း ဆောင်းပါး၊ စာအုပ် များ ရှိခဲ့ ရင် လမ်းညွှန်ပေး ကြပါ ။
honelay86, ko too, kosatsu, KoSetPe, Ni Maung, Nsaboy, shadow69, solomonvanhmun, THIHA, TUN2N, xxMMCPxx, yokesoe
This message has been deleted by ngathant.
09-17-2011 05:30 AM #333
http://myanmarlinksdirectory.blogspot.com/ ဒီမှာတော့ တော်တော်စုံစုံ ရှိတာ တွေ့တယ်
(The Place You Can Enjoy Everything Knowledgeable)
abya, CHITYINNHTOO, greenwood, honelay86, JanJan, ko too, KoKoNaung, kosatsu, KoSetPe, ktg, LLay, Ni Maung, Nsaboy, painpainlay, PiNyat, saimgmg, solomonvanhmun, sweetee, THIHA, thuthuaung, yokesoe, zero6
09-23-2011 07:39 PM #334
Thanked 3,526 Times in 210 Posts
Originally Posted by Edwardaung
abmfabmfwdkYa&...usef;rma&;ESifYywfoufwJY zdk&rf av;rsm;&Sd&if rQa0MuygOD;Asm..
"www.mma-malaria.net" is one of the health information website especially for malaria. It include updated National Malaria Treatment Guideline, National Malaria Control Policy, Rapid Diagnosis Test Kit, Project activities etc. Enjoy it. thz alot talltar...
cannavaro, honelay86, JanJan, Ko Khant, ko too, Komaena, KoSetPe, ktg, Ma Ni, mgmoe, Nsaboy, painpainlay, THIHA, TUN2N, yokesoe
10-03-2011 08:55 AM #335
Thanked 734 Times in 51 Posts
Domain eJU Hosting udkaps;aygaygeJU 0,fcsif&if atmuf u vifhudk oGm;MunfhMuyg/
awmfawmf oufomygw,f/ Domain + Hosting udk wpfESpf US$20 eJU 0,fvdkU &w,fwJh..
gypsydoll, honelay86, ko too, Nsaboy, painpainlay, THIHA, yokesoe, zero6
11-13-2011 10:32 AM #336
အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ဆိုက်လေးတစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ...
www.Jobformyanmar.com မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။ www.jobformyanmar.com
ဆိုတာက အရွယ်ရောက်ပြီး မြန်မာတွေထဲက ပညာရေး ချို့တဲ့သူတွေ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ
ဖြစ်ခဲ့သူတွေ၊ ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်အကိုင်တစ်ခုရှာဖွေနေသူတွေ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ
အလုပ်အကိုင် တစ်ခုရရှိနိုင်ရေး အတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာ၊
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းငယ်လေးများကို ထူထောင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အလုပ်အကိုင် သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပိုမိုသိရှိနိုင်အောင်၊ ကျွမ်းကျင် လာအောင်နဲ့ ပြန့်ပွားရှင်သန်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ရှာဖွေလိုတဲ့လူငယ်တွေ မိမိတို့ပြင်ဆင်သင့်တာတွေကို သိရှိလာပြီး အန္တရာယ်များကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ပြီး မိမိပြင်ဆင်သင့်သည်များကို သိရှိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ www.jobformyanmar.com မှာတင်ထားတဲ့
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း မှန်/မမှန်စီစစ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
ယုံကြည်စိတ်ချစွာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သေချာအောင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေ၊ အလုပ်ရှင်တွေကို လည်း အသင်းဝင် အဖြစ်
ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ကြိုးစားကြမှ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ တစ်ခုပြန်လည်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
jackknife, ko too, kohtwe, ktg, lickeroo, mgchaint, mgmgkyaw, mgmgthan, painpainlay, talkyboy, THIHA, yarthiudu, yokesoe, zelpha, zero6
11-13-2011 10:55 AM #337
online မှ ကျောင်းတက်ချင်သူများနဲ့ ပညာသင်ဆုလျှောက်ချင်သူများအတွက်
FreezE, greenwood, ko too, ktg, MaungHtwe, mgmgthan, mrlynn, painpainlay, systemVI, tiptop, Yamarmoto, yarthiudu, yokesoe, ZuKa
11-14-2011 12:47 AM #338
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားအကြောင်းရေးထားတဲ့ ဘလော့လေးများရှိရင် မစကြပါဦးနော်.. ဘလော့တွေရှာရင် ဟင်းချက်နည်းတွေကများနေလို့ပါ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာပွဲလေး အညာရှုခင်းလေး ဒေသခံလေးတွေကို အလွမ်းပြေကြည့်ချင်လို့ပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
FreezE, honelay86, ko too, painpainlay, TUN2N
11-16-2011 12:52 PM #339
jrefrmopfyifawGeJUywfoufwJU wedsite vdkcsifvdkUygcifAsm.......
FreezE, honelay86, ngatetpyar, painpainlay, THIHA, TUN2N
11-28-2011 06:12 PM #340
အကိုတို့ အမ တို့ရေမြန်မာနိုင်ငံရဲံ မြို့နဲ့လူဦးရေ အရေအတွက် စာရင်းတွေ ရှိတဲ့ ဆိုက်ဒ် ကလေးတခုခုလောက် link လေးကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးကျပါလားခင်မျာ.............. ....
FreezE, honelay86, NyoMar, painpainlay, THIHA, TUN2N